Olee otú Send Ringtone na ekwentị gị
Kasị color ka ọrụ ibudata ụdaolu kpọmkwem site ha igwe. Ma ihe ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ya ọzọ adaba download ụdaolu na desktọpụ gị na kọmputa? Ị maara otú i nwere ike jikwaa nyefee ya na ekwentị mkpanaaka gị? E nwere ọtụtụ ụzọ na-eme nke a, ha niile na-mfe ịrụ! Isiokwu a ga-akụziri gị otú iziga ọkacha mmasị gị ụdaolu na ekwentị mkpanaaka gị enweghị ike.
Usoro 1: Na Uniring
Usoro 2: Na RingerDrop
The Universal Ringtone Ntụgharị nke Uniring bụ a software omume nke na-ahapụ ndị cellphone ọrụ nyefee ụdaolu mfe na ngwa ngwa n'ime ya cellphone ya wuru na-ringtone dere na-enweghị mkpa USB wires ma ọ bụ oké ọnụ SMS ọrụ.
Nzọụkwụ 1 Gaa Uniring
Uniring bụ web-dabeere software na-atọghata ọ bụla Nokia RTTTL ụdaolu ọ bụla format na bụ dakọtara na ndị ọzọ mobile cellular ụdị. Nke a bụ ọrụ free na unu adịghị mkpa aha iji ya.
Nzọụkwụ 2 Họrọ usoro
N'okpuru ị ga-ahụ ndepụta nke nhọrọ nke ebe ị na-aga iji tọghata gị RTTTL, họrọ na nke a kasị dakọtara na ekwentị gị unit site na-ejikọ ndị njikọ.
Nzọụkwụ 3 Nweta urụk nke Usoro
Mgbe ị na-ahọrọ gị nhọrọ, Uniring ga-egosi n'elu otu ma ọ bụ karịa urụk nke koodu na-egosi na "ozi 1," "Ozi 2" na na. Na-aga na-ụdaolu maka ekwentị gị. Iji idetuo na mado ederede faịlụ, i nwere ike iji kọmputa gị clipboard.
Pịa ebe a, ị nwere ike hazie gị ringtone. Ị nwere ike idezi tempo, pitch, na karịa SMS ozi ogologo (ma ọ bụrụ na ị na-converting gị ringtone ka ọnụọgụ abụọ Nokia format)
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ị na-nwere ma ọ bụ na-achọ inwe gị onwe gị ringtone Ntụgharị saịtị na-eji Uniring Ntụgharị, ị pụrụ iji ya n'elu na-arịọ maka ikike, dị nnọọ eziga email ka cellphones.guide@about.com.
RingerDrop.com bụ a web-dabeere software ulo oru na 2008 na-enye ohere ndị ọ bụla akụkụ nke ụwa ka mfe nyefee ọ bụla ụdaolu ha na-amasị ndị na-azọpụta ha na kọmputa ruo na ekwentị mkpanaaka mfe nke na-adịghị achọ ihe ọ bụla ngwaike. Ha na-enyekwa ogologo ndepụta ụdaolu i nwere ike ozugbo download ha website na zipu na ekwentị mkpanaaka gị.
Nke a website akwado ọtụtụ n'ime ringtone formats gụnyere Midi, WAV, mp3, ma Nokia ụdaolu. Ọ nwere ike na-akwado bụla na ekwentị mkpanaaka ụgbọelu dị ka ogologo oge dị ka i nwere a mobile nchọgharị weebụ na mobile mkpuchi, ị bụ ọma na-aga!
Ebe a bụ otú iji ọrụ a:
Nzọụkwụ 1 Pịnye na ekwentị mkpanaaka gị Number
The ihe mbụ i kwesịrị ime bụ pịnye ke gị 10-ọbula ọnụ ọgụgụ, jide n'aka na ọ bụ nanị 10! Ọ bụrụ na ị nwere mobile ọnụ ọgụgụ ahụ bụ ihe karịrị 10 digits na ị na-ahụ nke a na-agbagwoju anya, ihichapụ ngafe nọmba site na mmalite nke mkpanaaka gị nọmba. Ka ihe atụ, nọmba gị bụ + 63926-603-0144, gụọ ruo 10 site na nsọtu, na ihichapụ ihe na-ekpe, ka ọ na-aga na-926-603-0144.
Nzọụkwụ 2 Họrọ Ị ekwentị ụgbọelu
Ebe ị ga-họrọ aha ekwentị mkpanaaka gị netwọk ụgbọelu, dị nnọọ pịa dobe ala akụ na ị ga-nyere a ndepụta nke netwọk na-ebu dabeere na United States. Ma echegbula bụrụ na ị bụ si dị iche iche akụkụ nke ụwa dị ka nke a bụ ụwa maka onye ọ bụla! Ya mere, ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ aha gị mobile netwọk ụgbọelu, dị họrọ 'm N'azụ USA'.
Nzọụkwụ 3 bulite gị Ringtone
Ebe ị ga-ahọrọ faịlụ ma ọ bụ ringtone na ị ebudatara online ma ọ bụ i mere onwe gị izipu ekwentị gị. Dị nnọọ pịa Họrọ File bọtịnụ na ị a faịlụ nchekwa ga-gbapụta si, dị nnọọ na-agagharị na họrọ faịlụ ị chọrọ izipụ na ekwentị gị, na-anọgide na ikpeazụ nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 4 Bulite Ringtone
Na dị ka nke ikpeazụ nzọụkwụ, dị nnọọ pịa bulite ringtone na-eche maka faịlụ ka na-abata na ekwentị mkpanaaka gị. Nke a nwere ike na-a ole na ole oge n'ihi na website ka ga n'ịwa Koodu ka e ziga gị, ma echegbula n'ihi na ọ dịghị-emekarị na-nnọọ ogologo. Ọ bụrụ na ọ na-eme na-abụghị gị-enweta zitere na ekwentị gị, ego nkọwa ị na-etinye na-eme n'aka ọnụ ọgụgụ na ụgbọelu e debere n'ụzọ ziri ezi.
NDỤMỌDỤ: Were mara na iji nke a RingerDrop bụ nnọọ free; Otú ọ dị, gị mobile netwọk ụgbọelu nwere ike na-ana a obere ego na akwụmụgwọ gị ibu maka inweta SMS na ringtone njikọ.
Izipu ọhụrụ gị mmasị ụdaolu na ekwentị mkpanaaka gị dị mfe dị ka 1, 2, 3, ekele na nkà na ụzụ na ndị mere eziga ụdaolu anyị na ekwentị mkpanaaka ihe adaba na o kwere omume. Ị na-adịghị iwepụtakwu oge achọ gị USB waya ma ọ bụ agbaziri ma ọ bụ ịzụ otu, n'ihi na ugbu a, ị pụrụ ime ya site nnọọ ole na ole clicks na gị òké na keyboard.
Top 30 Ringtone egbutusị maka ihe ọ bụla Platform
Top 30 nrụọrụ ka Download Free Ringtones
FLV Splitter: Olee otú SPLIT FLV Files Fast (Windows 10 gụnyere)
Olee otú Tinye Ndepụta Okwu ka AVI Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Top 10 Atụmatụ gị mkpa maara banyere mara mma ihuenyo edekọ
Guide / Olee-Iji Jiri Windows Movie Onye kere
Olee otú iji tọghata Audio na MP4 / MKV si AAC ka AC3
Olee otú Play ọ bụla WMA on iPod Mfe
Olee otú Download Flash Videos maka Free
View exported 3D Video on PC ma ọ bụ 3D TV
Olee otú Mee Christmas kaadị ekele na Videos
> Resource> Video> otú iziga Ringtone na ekwentị gị